Ebay Integration - Amidio amin'ny Ebay miaraka amin'ny Propars E-Export
Ny fitantanana ny fivarotana Ebay.com dia mora amin'ny Propars!
Manomboha mivarotra amin'ny Ebay miaraka amin'ny Propars, ary ny vokatrao dia amidy any amin'ny firenena 24 samy hafa!
Tena mora ny mandefa e-mail amin'ny firenena 24 miaraka amin'ny Propars Ebay!
Ny kaontinao avy amin'ny ebay dia voaangona amin'ny efijery iray ihany miaraka amin'ny baiko hafa rehetra.
Azonao atao ny mivarotra ny vokatra ampidinao amin'ny Propars amin'ny ebay amin'ny tsindry tokana.
Ebay, izay tsena an-tserasera voalohany, dia mbola anisan'ny tsena lehibe indrindra eran-tany. Ebay, izay manana tsena matanjaka amin'ny firenena sy sokajy rehetra, no mpitarika amin'ny sokajy sasany toy ny kojakoja fiara sy ny vokatra indostrialy. Toerana tokony ho tombananao araka ny vondrona vokatrao sy ny firenena kendrena.
Tena zava-dehibe amin'ny orinasanao ny fidirana amin'ny sehatra rehetra azo atao amin'ny e-varotra. Ebay dia sehatra tsy maintsy ananana ho an'ny orinasa e-varotra. Miaraka amin'ny mpanjifa an-jatony tapitrisa sy sehatra ahafahanao mivarotra ny tahan'ny fifanakalozana vahiny, dia manome fahafahana lehibe ho an'ny orinasa izany.
Amidy amin'ny firenena 26 miaraka amin'ny Propars Ebay Integration
Ebay dia mavitrika amin'ny firenena 26 samihafa. Ny fitenin-drazana amin'ireo firenena ireo dia manome serivisy ary anisan'ny sehatra misongadina ao amin'izy ireo.
Propars no mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana amin'ny Ebay hatramin'ny taona 2016. Ny fampidirana Propars dia manatanteraka ny filanao rehetra mba ho lasa mpivarotra ao amin'ny tontolo iainana manerantany an'ny Ebay. Mazava ho azy fa tsy azo atao ny mivarotra any amin'ny firenena sy fivarotana 26 tsy misy fanohanana. Na izany aza, miaraka amin'ny Propars, azonao atao ny mitantana ny fivarotana Ebay rehetra ao amin'ny tontonana mitovy amin'ny fivarotanao an-tserasera hafa. Azonao atao ihany koa ny mandray soa avy amin'ny fanohanan'ny fiteny ao amin'ny tontonana izay ahafahanao mitantana ho azy ireo tahiry sy baiko rehetra. Ireo vokatra soratanao amin'ny Propars amin'ny fitenin-drazanao dia adika amin'ny tenin-drenin'ny firenena hamidy sy hamoahana azy ireo. Ho fanampin'izany, avadika ho singa fandrefesana eo an-toerana ampiasaina any amin'ny firenena 26 samihafa ny singam-pandrefesana ny vokatrao, ary asehon'ny mpanjifanao amin'ny singa fandrefesana azy manokana ireo vokatrao.
Raiso mora ny fandoavanao
Indrindra taorian'ny fisintahan'i Paypal tao Torkia, nandalo dingana sarotra ireo orinasa mivarotra na mikasa ny hivarotra amin'ny Ebay. Saingy lasa lavitra ireo andro ireo. Miaraka amin'ny serivisy fandoavam-bola toy ny Payoneer, azonao atao ny mamindra mora foana ny fandoavam-bola ao amin'ny fivarotanao amin'ny kaontin'ny banky any Turkey.
Ny vola afindranao amin'ny kaontinao amin'ny banky amin'ny vola vahiny na TL dia afindra ao anatin'ny fotoana fohy ary miaraka amin'ny tahan'ny komisiona ambany.
Azonao atao ny mandray soa avy amin'ny taham-pivoarana fihenam-bidy sy tombontsoa isan-karazany amin'ny alàlan'ny fahazoana fanohanana avy amin'ny ekipa Propar ho an'ny kaontinao Payoneer. Propars dia mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana Payoneer any Torkia. Raha mbola tsy manana kaonty amin'ny Payoneer ianao dia mamela ny kaontinao misokatra sy voafaritra amin'ny fivarotana Ebay.